Maninona i Martinique no toerana fitsangantsanganana vaovao?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Martinique » Maninona i Martinique no toerana fitsangantsanganana vaovao?
Martinique no nanondro ny toerana avo indrindra manerantany
Martinique notondroina ho toerana avo indrindra manerantany ho an'ny 2021 dia taratry ny zava-mahatalanjona maro amin'ny nosy miaraka amin'ny haren'ny kolontsaina sy ny hafanan'ny olony.
Ny nosy Caribbean Caribbean Island of Martinique no voatondro ho toerana ambony indrindra manerantany tamin'ny 2021.
Manaraka azy ny Beach City Beach any Florida, Etazonia ary Armacao dos Buzios, Brezila; I Martinique no nosy Karaiba tokana voatanisa amin'ireo Top 10 ao amin'ny lisitr'i TripAdvisor farany.
Ity fanavahana ity dia tena fanekena ny nosy satria ny lisitry ny Destination Destiny dia mifototra amin'ireo toerana manerana an'izao tontolo izao izay angonin'ny mpandeha ao amin'ny TripAdvisor.
Noho ny areti-mandringana manerantany izay nisy fiatraikany lehibe tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany tamin'ny taona 2020, dia ny fandehanana tany amin'ny Island of Flowers-mitovy amin'ny France tanibe - nakatona ho an'ny mpitsidika tsy EU. Saingy ny nosy frantsay miafina tsara indrindra dia mihoatra noho ny hatramin'izay teo amin'ny radara an'ny mpandeha amerikana, ho safidiny safidiny manaraka.
"Martinique notondroina ho toerana avo indrindra eto an-tany amin'ny alàlan'ny TripAdvisor ho an'ny 2021 dia taratry ny zava-mahatalanjona maro amin'ny nosy miaraka amin'ny harenan'ny kolontsainy sy ny hafanan'ny mponina ao aminy, hoy i François Baltus-Languedoc, tale jeneralin'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany Martinique. Miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra avy amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina dia manolo-tena mafy izahay amin'ny fanatanterahana ny ezaka stratejika eto Etazonia. Ity vaovao manaitaitra ity dia tsy ho tonga amin'ny fotoana tsara kokoa, ary manantena ny handray ireo namanay amerikana izahay. ”
Ho an'ireo mpandeha izay maniry fanandramana tsy hay hadinoina, ny Nosy Karaiba frantsay any Martinique dia manana zavatra maro hatolotra: avy amin'ny fivezivezena manaraka ny Bay of Fort-de-France (mpikambana ao amin'ny Club of the Most Beautiful Bay eto amin'izao tontolo izao) mandray antsitrika ao anaty rano mangarahara, mahita ilay sambo nentim-paharazana Yole voatanisa ao anatin'ireo UNESCOLova ara-kolontsaina manerantany, na manandrana ny tsangory AOC malaza indrindra eto an-tany, mba hitonona vitsivitsy fotsiny.
Afaka mandray Courses amin'ny College izao ny mpanakanto
Aeromexico dia nifanaraka tamin'ny Unions